November 22, 2021 - Celegroup
[ December 3, 2021 ] လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၉၀) ေက်ာ္က လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ပဲခူးငလ်င္ႀကီးလိုမ်ိဳး ငလ်င္အႀကီးစား ျပန္လႈပ္ႏိုင္ဟုဆို	Knowledge
[ December 3, 2021 ] ၃ကြိမ်သာသောက် ခါးနာပျောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်း	Knowledge
[ December 3, 2021 ] တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ချမ်းသာလိုလျှင် ဒီလိုလုပ်ပေးပါ	Knowledge
[ December 3, 2021 ] မိန်းမတွေဟာ ဒီလိုနဲ့ အရွယ်အိုမင်းသွားခဲ့တယ်	Knowledge
[ December 3, 2021 ] အပတိရူပဒေသ ရန်ကုန် (သို့) ရန်ကုန်မှာ လုံးဝမနေသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၆) ချက်	Knowledge
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို အစပြုချင်တဲ့သူများအတွက်အောင်မြင်စေမယ့် နည်းလမ်းများ
November 22, 2021 Celegroup1975 0
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို အစပြုချင်တဲ့သူများအတွက်အောင်မြင်စေမယ့် နည်းလမ်းများ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး တည်ထောင်မယ့်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ရန်အတွက် အဆက်အသွယ်ကောင်းများ အများအပြားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့Networking ပိုင်းကို ချဲ့နိုင်သမျှ များများချဲ့လေ မိမိရဲ့စီးပွားရေး အောင်မြင်လေပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို စတင်လုပ်ကိုင်မယ့် သူများအတွက် ဘယ်လိုအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်သလဲဆိုတာကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ သေသေချာချာသိနားလည်အောင် ပြုလုပ်ပါ သင့်လက်ထဲမှာ ငွေအရင်းအနှီး ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ငွေဘယ်လောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာလဲ။ တစ်နေ့လျှင် ဘယ်နှနာရီ အလုပ်လုပ်နိုင်သလဲ။ သင့်ရဲ့မိသားစုကရော သင့်အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ […]
တနေ့သောအခါ ဘုရင်ကြီးတပါးဟာ မြို့ထဲမှာ တိုင်းခန်း လှည့်လည်နေရင်း လမ်းဘေးမှာ ထိုင်ပြီး တောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားတယောက်ကို တွေ့လိုက်တယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ သူတောင်းစားကို မြင်ပြီး သနားတာနဲ့ ရွှေတုံးတွေ ပါတဲ့ အိတ်တလုံးကို စွန့်ကြဲလိုက်တယ်။ သူတောင်းစားလည်း အိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာ ရွှေတုံးတွေ မြင်လို့ ဝမ်းသာသွားပြီး ဘုရင်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထပ်ထပ် အခါခါ ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ သူ့ အိမ်ကို ဝမ်းသာအားရနဲ့ အိမ်ကိုပဲ […]
တခါတုန်းက အရမ်းချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးတဦးဟာ သူ့သားကို ဆင်းရဲသား လယ်သမားတွေ နေထိုင်တဲ့ ကျေးလက်ဒေသကို ခေါ်သွားတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ သူ့သားအနေနဲ့ ဆင်းရဲသားတွေ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ဘဝတွေကို သိစေချင်လို့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ သူဌေးကြီး သားအဖဟာ အဆင်းရဲဆုံးလို့ ထင်ရတဲ့ မိသားစုတစု ထံမှာ ရက်အနည်းငယ် နေထိုင်ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အပြန်လမ်းမှာ သူဌေးကြီးက သူ့သားကို မေးတယ်။ “ဒီခရီးက ဘယ်လိုနေလဲ သား” “အရမ်းကောင်းပါတယ် အဖေ” […]
တစ်နေ့ အောင်မြင်မယ်လို့ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
တစ်နေ့ အောင်မြင်မယ်လို့ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အောင်မြင်မယ့်သူဟာ နဖူးမှာ စာပါလာတာ မဟုတ်တော့ လူတစ်ယောက် အောင်မြင်လာမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ကြိုမမြင်နိုင်ကြပါဘူး။ ပြောနိုင်တာက အပွေးမြင် အပင်သိဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကျိန်းသေပေါက် အောင်မြင်မယ့်သူမှာလည်း သူ့လက္ခဏာနဲ့ သူ ရှိကြပါတယ်။ (၁) ကိုယ်လိုချင်တာကို သိတဲ့သူ ဘဝမှာ ဘာမှ မရသေးခင်ကတည်းက ကိုယ်လိုချင်တာ ဘယ်လိုအရာမျိုးလဲ တိတိကျကျ သိနေတာဟာ အောင်မြင်မှု လမ်းပေါ် တက်နေတာပါပဲ။ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ […]
KTV သွားမှန်းသိလို့ ကျော်ကြီး မိန်းမ ဖုံးဖွင့်စစ်ဆေးရာ လမင်းမေရယ် ကြယ်စင်မေရယ် မောင့်အိပ်မက်မေရယ် တွေ့လိုက်တဲ့အခါ….
ကျော်ကြီးတယောက် ခွက်ပုန်းကစ်ပြီး ညည KTV သွားတာကို သူ့မိန်းမ အတန်အသင့် သတိထားမိလေပြီ။ တနေ့ ကျော်ကြီး ရေချိုးနေတုန်း ကျော်ကြီး မိန်းမ ဖုံးဖွင့်စစ်ဆေးရာ တွေ့လေပြီ။ လမင်းမေ တဲ့ဒေါသတကြီး ချက်ချင်းခေါ်ကြည့်ရာ သားပြောလေဆိုသော ယောက္ခမ အသံကြားရလေသည်… သံသယစိတ်က မပြောက်သေး ထပ်ရှာကြည့်ရာ တွေ့ပါပြီ ဒီတခါ ကြယ်စင်မေ တဲ့ကျော်ကြီးမိန်းမလည်း အောင်နိုင်သူ အပြုံးဖြင့် တချက်ပြုံးပြီး ဆက်လိုက်ရာ ကိုကျော်ပြောဟူသော ယောင်းမ အသံသာ […]
( ဝ )သုံးလုံး ဆောင်ထားပါ…
( ဝ )သုံးလုံး ဆောင်ထားပါ တစ်ခါတုန်းက…မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး မုံရွာမြို့သို့ကြွတော်မူသောအခါ ဆရာတော်ကြီးနှင့် အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောအသက်( ၈ဝ )ကျော် အဖွားအိုတစ်ဦးကကြုံတုန်းကြုံခိုက်သူမကို ဆုံးမသြဝါဒ ပေးသနားဖို့လျှောက်တင်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးက…ဒကာမကြီး အ သက်အရွယ် ကြီးရင့်လာပြီဆိုတော့( ဝ )သုံးလုံးကို ဆောင်ထားဗျ။ ၁။ ဝ ဝ စားတဲ့ – အသက်အရွယ်တွေက ကြီးရင့်လာပြီဆိုတော့ကိုယ် ခန္ဓာက အားအင်တွေတစ်နေ့တစ်ခြား ဆုတ်ယုတ်လာပြီ။ဝဝစားမှ အားရှိမှာ။အားရှိမှ တရားဘာဝနာကို အားထုတ်နိုင်မှာ။ ဒါကြောင့် ဒကာမကြီး ဝဝစားပါ။ […]
မိန်းခလေးတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်
မိန်းခလေးမှန်ရင်သိမ်းထား 1.မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မယ်ဆို အောက်ခံ အသားအရည်ကို အရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ 2.မိတ်ကပ်ကို အိမ်မှာနေရင် မလိမ်းပါနဲ့ 3.မိတ်ကပ်ကို အပြင်သွားပြီး ပြန်လာတာနဲ့ တစ်ခါထဲ ဖျက်ပါ 4.မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့နေ့တွေမှာ မျက်နှာကို သေချာသန့်စင်ပါ ၊မိတ်ကပ် က မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာ တခုသုံးယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး 5.မိတ်ကပ်ဖျက်မယ်ဆို မိတ်ကပ် remover သုံးပြီးသန့်စင်ပြီးမှ မျက်နှာသစ်ပါ 6.မိတ်ကပ် remover ကို အလေအလွင့်နည်းအောင် ယနေ့ခေတ် အသုံးများလာကြတဲ့ ready made […]
သဒ္ဓါသာရှိပြီး ပညာကင်းမဲ့ခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲ ကမ်းနဲ့ရေလည်ဘုရားနဲ့က တမိုင်ပတ်လည်လောက် ဝေးသတဲ့၊ (ပြောကြတာနော်)။ ဖြတ်သွားရတာက ရေတွေ။ ရေကမှ ရေအငြိမ်မဟုတ်၊ လပြည့်ကျော်သုံးရက်မှာ တက်တဲ့ရေ တဲ့။ တဖက်မှာက ပင်လယ်။ ဒါကိုတောင်မှ ကလေးတွေပါခေါ်ပြီး ဒီရေကြား ဖြတ်သတဲ့။ ဟော… သေတဲ့သူသေ၊ နစ်တဲ့သူနစ်၊ ပျောက်တဲ့သူပျောက် ဆိုပါလား။ ဘုရား ကယ်-မကယ် တော့ မသိပေမယ့် မသာပေါ်တာ လက်တွေ့။ ‘ချစ်သားတို့၊ ရေတက်တက် ရေကျကျ ငါဘုရားကိုဖူးလှည့်ကြ’ လို့ […]
တခါတုန်းက ဆိတ်ကျောင်းသားလေး တယောက်ဟာ ဆိတ်တွေကို စားကျက်ဆီ လွှတ်ထားတုန်း တောင်ဆိတ် အချို့ဟာ သူ့ဆိတ်အုပ်ထဲရောက်ရှိနေတာကို သိသွားတယ်။ ညနေရောက်တော့ ဆိတ်ကျောင်းသားလေးဟာ အဲဒီ တောင်ဆိတ်တွေ ကိုပါ ခေါ်ပြီး သူနေတဲ့ ဂူဆီ ဆိတ်တွေကို ကျောင်းခဲ့တယ်။ နောက်တနေ့မှာ ရာသီဥတုက အတော်လေး ဆိုးရွားနေလို့ ဆိတ်တွေကို စားကျက်ဆီကို ထုံးစံအတိုင်း ခေါ်မသွားနိုင်ဘူး။ သူတို့ကို ခြံထဲမှာပဲ ထားတာပေါ့။ ဆိတ်ကျောင်းသားက သူ့ဆိတ်တွေကို အစာ ဝရုံလေးပဲ […]
သေခါနီး လူတစ်ယောက်ကိုဖက်ပြီး မငိုကြပါနဲ့
သေခါနီး လူတစ်ယောက်ကိုဖက်ပြီး မငိုကြပါနဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာသေခါနီးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာနှလုံးမခုန်တော့ပါဘူးသွေးကြောလေးတွေအလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ခြေ လက်တွတကိုယ်လုံး ဘာမှ မလှုပ်ရှားတော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာလူတွေက သေပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။မိသားစုဝင်တွေက အော်ငိုကြတယ်။ သွေးခုန်နှုန်း ရပ်သွားတော့သေသွားပြီ ထင်လို့လေ။အဲဒီအချိန်မှာတကယ်မသေတာက ကြားစိတ်ပါ။ ကြားစိတ်က…နှလုံး သွေးခုန်နှုန်းရပ်သွားတာတောင်( ၃ )မိနစ် ( ၅ )မိနစ်လောက်ရှင်သန်နေပါသေးတယ်။ တချို့လူတွေက…သေခါနီးလူကိုအသက်မထွက်သေးဘူး။လူမစုံသေးလို့ဟိုလူ့ကို စောင့်နေတယ်ဒီလူ့ကို စောင့်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်။ မိသားစုဝင် ရောက်လာတော့ဖက်ပြီး ငိုကြတယ်။အဲဒါက သေခါနီးလူတစ်ယောက်ကိုအပါယ်ဘုံရောက်အောင် ပို့လိုက်တာပါပဲ။တကယ်တော့…သူဟာ မိသားစုဝင်ကိုစောင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလျကံကအားနည်းနေတယ်။ဝိပဿနာတရားကလည်းအားထုတ်ဘူးတာ […]
1 ရက် 3000 စုယုံနဲ့သူဌေးဖြစ်ပြီလား
1 ရက် 3000 စုယုံနဲ့သူဌေးဖြစ်ပြီလား ဟိုနေ့က စာလေးတစ်ပိုဒ်မြင်လိုက်ရတယ်…. တစ်ရက် ၁၀၀၀ စုရင် ၅ နှစ် ၁၈ သိန်း… တစ်ရက် သုံးထောင်စု…. နောက်၅နှစ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစနိုင်တယ်ဆိုပြီး တွက်ပြထားတယ်။ မှန်လားဆိုတော့ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတွက်ကြည့်ပါ…. ၁။ ငွေ ကြေးပြောင်းလဲမှု ပထမဆုံး သိရမှာက သိန်း ၅၀ ဆိုတာ …. နောက် ၅နှစ်ဆိုရင်သိန်း ၅၀ မတန်တော့ဘူး […]
ရစရာရှိနေသော အကြွေးများ အမြန်ပြန်ရစေလိုလျှင် ယတြာ မိမိအကြွေးများအမြန်ပြန်ရစေရန်အတွက် အစီရင် ၇ရက်သားသမီး ကြုံတွေ့နေကျ ကြွေးပေး /ကြွေးယူ ကိစ္စများတွင် တချို့အဆင်ပြေရက်နဲ့ရှောင်ဖယ်ဖယ်လုပ်နေသူများ ကြားကနေ အာမခံလုပ် ပေးရင်းနဲ့ကြွေးပူမိနေသူများ အကြွေးယူပြီး ထွက်ပြေးနေလို့ပူပန်သောက ရောက်နေရသူများအတွက် ဆရာ ယတြာတစ်ခု မျှဝေပါရစေ။ (မိမိအကြွေးရရမည့်သူ တကယ်စားဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေပါက ဤယတြာကိုမပြုလုပ်ပါနှင့်) ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ် ငှက်ပျောရွက်တစ်ရွက်(ငှက်ပျောရွက်ကို လေးဒေါင့်ပုံ ဖြတ်ယူပါ ပုံအတိုင်း) တင်ပြီး ငှက်ပျောရွက်ပေါ်တွင် တစ်ထောင်တန် တစ်ရွက်တင်ပါ။ ငွေတစ်ထောင်ကျပ်ပေါ်တွင် […]
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၉၀) ေက်ာ္က လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ပဲခူးငလ်င္ႀကီးလိုမ်ိဳး ငလ်င္အႀကီးစား ျပန္လႈပ္ႏိုင္ဟုဆို
၃ကြိမ်သာသောက် ခါးနာပျောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်း
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ချမ်းသာလိုလျှင် ဒီလိုလုပ်ပေးပါ